Free fanompoana an-tserasera. Tohatra mivantana azo tsapain-tànana
Kajy ny mahitsy tohatra avy amin'ny azo tsapain-tànana
sary sehatra 1: 0.25 0.5 1 1.5 2 3 4
Ny haavon'ny ny tohatra Y
Ny halavan'ny ny tohatra X
Length ny sehatra A
Ny hatevin'ny ny pad B
Fanampiny hateviny Z
fanitarana dingana F
Ny hatevin'ny ny dingana G
Fanamafisana tapa an-tsehatra K
Manampy amin'ny calculating mahitsy tohatra avy amin'ny azo tsapain-tànana
Ao ny kajy, dia afaka misafidy roa karazana dingana fanorenana.
Size fanendrena monolithic azo tsapain-tànana tohatra
Dimensions ao millimeters.
X - Ny halavan'ny ny tohatra
Y - Ny haavon'ny ny tohatra
W - Ny sakan'ny ny tohatra.
A - Length ny sehatra. Raha ny famolavolana ny tohatra dia tsy misy tokotanin-tsekoly, nametraka ny halavan'ny ny sehatra = 0.
В - Ny hatevin'ny ny pad.
Z - Fanampiny hateviny. Nalaina an-kaonty afa-tsy ny fomba kilasika ny tohatra.
F - Fanitarana dingana.
G - Ny hatevin'ny ny dingana. Ao amin'ny karazana tohatra mahazatra no ampiasaina ho toy ny manondro molotra hateviny F.
Fanamafisana monolithic tohatra.
Fanamafisana ihany no tokony ampiasaina amin'ny karazany 1 monolithic tohatra.
Na izany aza, izany rehetra izany dia miankina amin'ny tetikasa.